တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်ဂိတ် တနေရာ
တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ်၊ ရွှေလီမြို့က ဘဏ်တွေမှာရှိတဲ့ မြန်မာကုန်သည်တွေရဲ့ ငွေစာရင်းတွေကို တရုတ်အာဏာပိုင်တွေ ရုတ်တရက် ပိတ်လိုက်တဲ့အတွက် ၂ နိုင်ငံတာဝန်ရှိသူတွေ ဖြေရှင်းဖို့ ညှိနှိုင်းနေတဲ့အကြောင်း ပြောပြပါမယ်။ ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်း သတင်းထောက် ကိုဇော်ထက်က သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
ရွှေလီမြို့က ဘဏ်တွေမှာရှိနေတဲ့ မြန်မာကုန်သည်တွေရဲ့ ဘဏ်စာရင်းတွေကို စိစစ်ဖို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ မကြာသေးခင်ကပဲ ပိတ်လိုက်တာကြောင့် အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းပေးဖို့ မြန်မာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ကုန်သည်တွေ ဒီနေ့ပဲ တရုတ်နိုင်ငံက တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး တောင်းဆိုလိုက်တာပါ။ ဒီလိုတွေ့ဆုံရာမှာ မြန်မာကုန်သည်တွေရဲ့ ဘဏ်စာရင်းတွေကို စိစစ်ဖို့ရှိနေတဲ့အကြောင်း တရုတ်ဘက်က တုံ့ပြန်ခဲ့တယ်လို့လည်း မူဆယ်ခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမောင်မောင်သန်းက ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။
“တရုတ်ကနေ မြန်မာဘဏ်အကောင့် ပိတ်တဲ့ကိစ္စတွေ ဒါ ရှင်းဖို့ တရုတ်ဘက်နဲ့ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ၁ နာရီခွဲကစပြီးတော့ ဆွေးနွေးနေတယ်။ (မူဆယ်) ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ပါတယ်ဗျ၊ ကျန်တာကတော့ ကုန်သည်ကြီးများအသင်းတို့ နကသတို့၊ အကောက်ခွန်တို့လည်း ပါပါတယ်။”
ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး မပြတ်တောက်ဖို့နဲ့ နယ်စပ်က နှစ်ဘက်ပြဿနာတွေ ညှိနှိုင်းဖို့ ရွှေလီမြို့တော်ဝန်နဲ့ မကြာခင်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးဖို့ စီစဉ်ထားကြောင်းလည်း ဦးမောင်မောင်သန်းက ပြောပါတယ်။
ဒီကနေ့ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရာမှာ ပါဝင်ခဲ့သူ တဦးဖြစ်တဲ့ မူဆယ်မြို့က ဆန်ကုန်စည်ဒိုင် ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးမင်းသိန်းကတော့ ဥပဒေမဲ့ လုပ်ရပ်တွေနဲ့ ဆက်နွယ်မှု ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးပြီး ကင်းရှင်းကြောင်း အတည်ပြုနိုင်တဲ့ ကုန်သည်တွေရဲ့ ငွေစာရင်းတွေကိုတော့ ပြန်ဖွင့်ပေးမှာ ဖြစ်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ တာဝန်ရှိသူတွေက တုံ့ပြန်ခဲ့တယ်လို့လည်း ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။
“ဘဏ်အကောင့် ပိတ်ခံရတဲ့သူတွေရဲ့ စာရင်းတွေပေါင်းပြီး အဲဒီစာရင်းတွေ စုစုပြီးတော့မှ ရွှေလီအာဏာပိုင်တွေကို တင်ပြထားတယ်။ ရွှေလီအာဏာပိုင်တွေက တဆင့် ယူနန်ပြည်နယ် အစိုးရထိ တင်ပြပြီးတော့ ဒီအကောင့်တွေကို စိစစ်ပြီး ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးဖို့ အစည်းအဝေး လုပ်တာပါ။ ဗမာဘက်က အကောင့်ကတော့ ခန့်မှန်းခြေ အခု ၁၆၀ လောက်ရှိတယ်။ သူတို့ပြောတာကတော့ ဒီလို မူးယစ်ဆေးဝါးကငွေတွေ ဝင်လာတယ်။ တချို့ကလည်း လောင်းကစားကငွေတွေ ဝင်လာတယ်။ အဲဒီငွေတွေကြောင့် ပြန်စစ်ဆေးချင်တယ်ပေါ့။ တကယ်လို့ လမ်းကြောင်းမှန်က ဝင်လာတယ်။ တရားဝင်တယ်ဆိုရင် ပြန်ဖွင့်ပေးမယ်.. အဲဒီလိုပြောတာပေါ့။”
မြန်မာကုန်သည်တွေရဲ့ တရုတ်နိုင်ငံက ဘဏ်စာရင်းတွေကို အရင်ကလည်း မကြာခဏ ပိတ်လေ့ရှိတတ်ပါတယ်။ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ ကူးစက်မှုတွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့ နယ်စပ်ဒေသ သွားလာလှုပ်ရှားမှုတွေကို တရုတ်နိုင်ငံက ကန့်သတ်ထားတာကြောင့် နေ့စဉ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂ သန်းလောက် ကုန်သွယ်မှုပမာဏရှိတဲ့ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှာ ထိခိုက်မှုတွေ ကြုံနေရချိန်မှာပဲ အခုနောက်ထပ် ကုန်သည်တွေ ဘဏ်စာရင်းပိတ်ခံရတဲ့ အခြေအနေနဲ့ ကြုံနေရတာပါ။
တချိန်တည်းမှာပဲ တရုတ်အာဏာပိုင်တွေ အာမခံပေးထားတဲ့ တရုတ်ဆန်ကုမ္ပဏီတခုက မြန်မာဆန်ကုန်သည်တွေဆီက ကျပ်ငွေသန်းပေါင်း ၁၀၀,၀၀၀ ကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ လိမ်လည်မှု ဖြစ်ပွားခဲတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ အရေးယူနိုင်အောင် စီစဉ်နေတယ်လို့လည်း မြန်မာကုန်သည်တွေက ပြောပါတယ်။ သံတမန်ရေးအရ ဖြေရှင်းလို့ မရရင် ဥပဒေကြောင်းအရပါ ဖြေရှင်းဖို့ ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့လည်း မြန်မာကုန်သည်တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးမင်းသိန်းက ပြောပါတယ်။
“ငွေလိမ်ခံရတဲ့သူတွေကို စာရင်းကောက်မယ်။ စာရင်းရပြီဆိုရင် စီးပွားရေးနဲ့ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနကို တင်ပြပြီး အကူအညီတောင်းမယ်။ ဒီလို ဒီလိုတော့ ဖြစ်ပါတယ် ဒါတွေကျနော်တို့ကို သံခင်းတမန်ခင်းအရ ဆွေးနွေးပေးပါ။ ဆောင်ရွက်ပေးပါဆိုပြီး မြန်မာနိုင်ငံ တရုတ်သံရုံးကတဆင့် တရားစွဲသင့် တရားစွဲမယ် အကြွေးတောင်းသင့်ရင် တောင်းမယ်။ လိုက်သင့်ရင် လိုက်ရမှာပေါ့။ အဲလိုတော့ စီစဉ်ထားတယ်။”
နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး၊ တရုတ်နိုင်ငံက အကောင်အထည်ဖော်နေတဲ့ ခေတ်သစ်ပိုးလမ်းမ စီမံကိန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြီးခဲ့တဲ့ မေလထဲမှာတုန်းကလည်း မြန်မာသမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်၊ တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင့်ပင်တို့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသလို၊ ယူနန်ပြည်နယ် ကူမင်းမြို့က မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ရုံး အရာရှိတွေနဲ့ တရုတ်ဒေသခံ အာဏာပိုင်တွေလည်း နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွေကို ဆွေးနွေးခဲ့ဖူးပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိက ကုန်သွယ်ဖက်တခုဖြစ်ပြီး နှစ်နိုင်ငံကြား ကုန်သွယ်မှုပမာဏဟာလည်း ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂ ဘီလီယံ (၁၂၁၂၆. ၂၇၈ သန်း) ကျော်ရှိခဲ့ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
တရုတျနိုငျငံ ယူနနျပွညျနယျ၊ ရှလေီမွို့က ဘဏျတှမှောရှိတဲ့ မွနျမာကုနျသညျတှရေဲ့ ငှစောရငျးတှကေို တရုတျအာဏာပိုငျတှေ ရုတျတရကျ ပိတျလိုကျတဲ့အတှကျ ၂ နိုငျငံတာဝနျရှိသူတှေ ဖွရှေငျးဖို့ ညှိနှိုငျးနတေဲ့အကွောငျး ပွောပွပါမယျ။ ဗှီအိုအမွေနျမာပိုငျး သတငျးထောကျ ကိုဇျောထကျက သတငျးပေးပို့ထားပါတယျ။
ရှလေီမွို့က ဘဏျတှမှောရှိနတေဲ့ မွနျမာကုနျသညျတှရေဲ့ ဘဏျစာရငျးတှကေို စိစဈဖို့ဆိုတဲ့ အကွောငျးပွခကျြနဲ့ မကွာသေးခငျကပဲ ပိတျလိုကျတာကွောငျ့ အမွနျဆုံးဖွရှေငျးပေးဖို့ မွနျမာတာဝနျရှိသူတှနေဲ့ ကုနျသညျတှေ ဒီနပေဲ့ တရုတျနိုငျငံက တာဝနျရှိသူတှနေဲ့ တှဆေုံ့ပွီး တောငျးဆိုလိုကျတာပါ။ ဒီလိုတှဆေုံ့ရာမှာ မွနျမာကုနျသညျတှရေဲ့ ဘဏျစာရငျးတှကေို စိစဈဖို့ရှိနတေဲ့အကွောငျး တရုတျဘကျက တုံ့ပွနျခဲ့တယျလို့လညျး မူဆယျခရိုငျ အုပျခြုပျရေး ဒုတိယညှနျကွားရေးမှူး ဦးမောငျမောငျသနျးက ဗှီအိုအကေို ပွောပါတယျ။
“တရုတျကနေ မွနျမာဘဏျအကောငျ့ ပိတျတဲ့ကိစ်စတှေ ဒါ ရှငျးဖို့ တရုတျဘကျနဲ့ ညှိနှိုငျးအစညျးအဝေး ၁ နာရီခှဲကစပွီးတော့ ဆှေးနှေးနတေယျ။ (မူဆယျ) ခရိုငျအုပျခြုပျရေးမှူး ပါတယျဗြ၊ ကနျြတာကတော့ ကုနျသညျကွီးမြားအသငျးတို့ နကသတို့၊ အကောကျခှနျတို့လညျး ပါပါတယျ။”
ကုနျစညျပို့ဆောငျရေး မပွတျတောကျဖို့နဲ့ နယျစပျက နှဈဘကျပွဿနာတှေ ညှိနှိုငျးဖို့ ရှလေီမွို့တျောဝနျနဲ့ မကွာခငျတှဆေုံ့ ဆှေးနှေးဖို့ စီစဉျထားကွောငျးလညျး ဦးမောငျမောငျသနျးက ပွောပါတယျ။
ဒီကနေ့ ညှိနှိုငျးဆှေးနှေးရာမှာ ပါဝငျခဲ့သူ တဦးဖွဈတဲ့ မူဆယျမွို့က ဆနျကုနျစညျဒိုငျ ဒုဥက်ကဋ်ဌ ဦးမငျးသိနျးကတော့ ဥပဒမေဲ့ လုပျရပျတှနေဲ့ ဆကျနှယျမှု ရှိ၊ မရှိ စဈဆေးပွီး ကငျးရှငျးကွောငျး အတညျပွုနိုငျတဲ့ ကုနျသညျတှရေဲ့ ငှစောရငျးတှကေိုတော့ ပွနျဖှငျ့ပေးမှာ ဖွဈကွောငျး တရုတျနိုငျငံ တာဝနျရှိသူတှကေ တုံ့ပွနျခဲ့တယျလို့လညျး ဗှီအိုအကေို ပွောပါတယျ။
“ဘဏျအကောငျ့ ပိတျခံရတဲ့သူတှရေဲ့ စာရငျးတှပေေါငျးပွီး အဲဒီစာရငျးတှေ စုစုပွီးတော့မှ ရှလေီအာဏာပိုငျတှကေို တငျပွထားတယျ။ ရှလေီအာဏာပိုငျတှကေ တဆငျ့ ယူနနျပွညျနယျ အစိုးရထိ တငျပွပွီးတော့ ဒီအကောငျ့တှကေို စိစဈပွီး ပွနျလညျဖှငျ့လှဈပေးဖို့ အစညျးအဝေး လုပျတာပါ။ ဗမာဘကျက အကောငျ့ကတော့ ခနျ့မှနျးခွေ အခု ၁၆၀ လောကျရှိတယျ။ သူတို့ပွောတာကတော့ ဒီလို မူးယဈဆေးဝါးကငှတှေေ ဝငျလာတယျ။ တခြို့ကလညျး လောငျးကစားကငှတှေေ ဝငျလာတယျ။ အဲဒီငှတှေကွေောငျ့ ပွနျစဈဆေးခငျြတယျပေါ့။ တကယျလို့ လမျးကွောငျးမှနျက ဝငျလာတယျ။ တရားဝငျတယျဆိုရငျ ပွနျဖှငျ့ပေးမယျ.. အဲဒီလိုပွောတာပေါ့။”
မွနျမာကုနျသညျတှရေဲ့ တရုတျနိုငျငံက ဘဏျစာရငျးတှကေို အရငျကလညျး မကွာခဏ ပိတျလရှေိ့တတျပါတယျ။ ကိုဗဈကပျရောဂါ ကူးစကျမှုတှကေို ထိနျးခြုပျဖို့ နယျစပျဒသေ သှားလာလှုပျရှားမှုတှကေို တရုတျနိုငျငံက ကနျ့သတျထားတာကွောငျ့ နစေ့ဉျ အမရေိကနျဒျေါလာ ၁၂ သနျးလောကျ ကုနျသှယျမှုပမာဏရှိတဲ့ နယျစပျကုနျသှယျရေးမှာ ထိခိုကျမှုတှေ ကွုံနရေခြိနျမှာပဲ အခုနောကျထပျ ကုနျသညျတှေ ဘဏျစာရငျးပိတျခံရတဲ့ အခွအေနနေဲ့ ကွုံနရေတာပါ။
တခြိနျတညျးမှာပဲ တရုတျအာဏာပိုငျတှေ အာမခံပေးထားတဲ့ တရုတျဆနျကုမ်ပဏီတခုက မွနျမာဆနျကုနျသညျတှဆေီက ကပျြငှသေနျးပေါငျး ၁၀၀,၀၀၀ ကြျောတနျဖိုးရှိတဲ့ လိမျလညျမှု ဖွဈပှားခဲတာနဲ့ ပတျသကျလို့ အရေးယူနိုငျအောငျ စီစဉျနတေယျလို့လညျး မွနျမာကုနျသညျတှကေ ပွောပါတယျ။ သံတမနျရေးအရ ဖွရှေငျးလို့ မရရငျ ဥပဒကွေောငျးအရပါ ဖွရှေငျးဖို့ ပွငျဆငျထားတယျလို့လညျး မွနျမာကုနျသညျတဦးဖွဈတဲ့ ဦးမငျးသိနျးက ပွောပါတယျ။
“ငှလေိမျခံရတဲ့သူတှကေို စာရငျးကောကျမယျ။ စာရငျးရပွီဆိုရငျ စီးပှားရေးနဲ့ ကူးသနျးရောငျးဝယျရေး ဝနျကွီးဌာနကို တငျပွပွီး အကူအညီတောငျးမယျ။ ဒီလို ဒီလိုတော့ ဖွဈပါတယျ ဒါတှကေနြျောတို့ကို သံခငျးတမနျခငျးအရ ဆှေးနှေးပေးပါ။ ဆောငျရှကျပေးပါဆိုပွီး မွနျမာနိုငျငံ တရုတျသံရုံးကတဆငျ့ တရားစှဲသငျ့ တရားစှဲမယျ အကွှေးတောငျးသငျ့ရငျ တောငျးမယျ။ လိုကျသငျ့ရငျ လိုကျရမှာပေါ့။ အဲလိုတော့ စီစဉျထားတယျ။”
နယျစပျကုနျသှယျရေး၊ တရုတျနိုငျငံက အကောငျအထညျဖျောနတေဲ့ ခတျေသဈပိုးလမျးမ စီမံကိနျးတှနေဲ့ ပတျသကျလို့ ပွီးခဲ့တဲ့ မလေထဲမှာတုနျးကလညျး မွနျမာသမ်မတ ဦးဝငျးမွငျ့၊ တရုတျသမ်မတ ရှီကငျြ့ပငျတို့ ဆှေးနှေးခဲ့ကွသလို၊ ယူနနျပွညျနယျ ကူမငျးမွို့က မွနျမာကောငျစဈဝနျရုံး အရာရှိတှနေဲ့ တရုတျဒသေခံ အာဏာပိုငျတှလေညျး နယျစပျကုနျသှယျရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျတှကေို ဆှေးနှေးခဲ့ဖူးပါတယျ။
တရုတျနိုငျငံဟာ မွနျမာနိုငျငံရဲ့အဓိက ကုနျသှယျဖကျတခုဖွဈပွီး နှဈနိုငျငံကွား ကုနျသှယျမှုပမာဏဟာလညျး ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ်ဍာနှဈမှာ အမရေိကနျဒျေါလာ ၁၂ ဘီလီယံ (၁၂၁၂၆. ၂၇၈ သနျး) ကြျောရှိခဲ့ကွောငျး မွနျမာနိုငျငံ ကုနျသှယျရေးဝနျကွီးဌာနက သတငျးထုတျပွနျထားပါတယျ။